Wilson Bikram Rai (Takme Buda) Biography | Hamro Kalakar
Biography last updated: 10th Nov, 2017
Facts of Wilson Bikram Rai (Takme Buda)
Actor, Comedian, Dancer, Producer, Singer
Makhamali Pachheuri Sanu
Contact Wilson Bikram Rai (Takme Buda)
Suggestion for Wilson Bikram Rai (Takme Buda)
Wilson Bikram Rai (Takme Buda) is Actor, Comedian, Dancer, Producer, Singer. He was born on 29th January in Birtamod, Jhapa. His horoscope is Aquarius. His marital status is Single. His height is5feet6inches. His favorite color is Black, favorite movie is Saayad, favorite music is Makhamali Pachheuri Sanu, favorite food is Nepali Food, favorite place is Ilam. He has recently been involved in movie A Mero Hajur 2.
घरमा टेलिभिजन थिएन । छिमेकीको घरमा टेलिभजन थियो । बासै उतै हुन्थ्यो विल्सनको । एक दिन सोले सिनेमा नकाटी पुरै दिने भन्ने हल्ला चल्यो । अबेर रातीसम्म बसेर सिनेमा हेरे । उनले भने, म हिरो भएर भिलेनलाई सिनेमामा झैं कुट्न पाए हुन्थ्यो । घरमा बुबा फायर । नमज्जाले पिटाई खाए उनले । बुबाले उनलाई अनौठो सजाय दिए । अबेर राती भइसकेको थियो । नुहाएर मात्रै घर छिर भने । केटाकेटी उमेरमा यसै पनि नुहाउन कति गाह्रो हुन्छ । म पनि उनी त्यस दिन नुहाएर घर पसे ।
त्यो सिनेमा हेरुन्जेल उनलाई आफै हिरो भए जस्तो लाग्यो । गुन्डाहरुलाई आफैले साफ धुलाई गरेजस्तो लाग्यो ।
विसं २०४३ माघ महिनामा झापामा जन्मिए । उनी सानै छँदा आमा बितिन् । उनी मातृबात्सल्यविहिन हुन पुगे । उनका बुबाले अर्को विवाह गरे । उनी दपेटिन थाले ।
राई नौ वर्षका थिए । उनमा चलचित्रको भूत सवार भइसकेको थियो । जसरी हुन्छ उनलाई अभिनय गर्नु थियो । त्यही समय झापामा चलचित्र ‘साथी’ को सुटिङ आयो । उनी सुटिङ स्पटमा गए । उनले टेलिभिजनमा देखेको राजेश हमाल हिरो थिए, त्यहाँ ।
त्यसमा बाल कलाकारको खोजी भइरहेको थियो । उनलाई चलचित्रमा खेल्नु थियो । जे मनमा लागेको छ त्यो सिधै भन्ने उनले सिधै राजेश हमाललाई भेटे र भने,“आई विल लाइक टु प्ले द मुभी, आई वील लाइक द एक्टर” राजेश हमालको शाहस देखेर छक्क परे, मुस्काए र धाप मारे । उनीसँग अझै पनि त्यो बेला राजेश हमालसँग खिचेको फोटो अझै सुरक्षित छ ।
उनले त्यो चलचित्रमा बे्रक पाए । एक दिन लगाएर सुटिङ गरे । झापा मोफसलको शहर । त्यसमा पनि उनी सेमी भिलेजका स्थानीय । त्यो समय नेपाली चलचित्रको ‘गोल्डेन युग’ । राजेश हमाल त्या समयको ‘मोष्ट डिमान्डेड’ नायक । अनि त्यो नायकसँग उनको हिमचिम । गाउँमा पुरै हल्लियो (राजेश हमालले विल्शनलाई चिन्छ भनेर । विल्सशनको पुरै गाउँ ‘साथी चलचित्रको रिलिज डेटको ब्यग्र प्रतीक्षा गरेर बस्यो ।
चलचित्र रिलिज हुने भयो । पहिलो दिन नै उनी हेर्न गए । पुरै एक दिन लगाएर सुटिङ गरेको उनलाई त चलचित्रमा झुलुक्क एक पटक पो देखाउँछ । कि राजेश हमाललाई देखाउँछ कि कुकुरलाई । चलचित्रमा फेरी उनी देखिएनन् ।
उनीकसैलाई नभनी काठमाडौं आए । बुबा सवारी चालक भएकाले मोटे गुरुजीको छोरो भनेपछि उनलाई सबैले चिन्थे । क्याविनमा बसेर स्टाफ खाना खाएर उनी काठमाडौं उत्रिए । उनीसँग पैसा थिएन । रित्तो हात काठमाडौं आए । उनीसँग एउटा नाइकको झोला थियो । त्यसमा एक जोर लुगा मात्र थियो ।
काठमाडौं आएर एक जना साथीसँग बस्न थाले । उनको ध्यान चलचित्रमै थियो । उनी चलचित्रकर्मी र सुटिङ स्पट खोज्न थाले । काठमाडौंमा बस्न त्यती सहज थिएन । उनी साँझ साँझ नाच्ने काम गर्न थाले । दिनभरी सुटिङ हेर्थे । सुटिङ हेर्न उनी दिनहुँ चोभार पुग्थे ।
उनी निर्माता निर्देशकसँग भूमिका माग्थे । अडिसन दिन्थे । तर उनी त्यो बेला बाल कलाकारमा खेल्नलाई उमेर नागिसकेको नायक वा नायकको साथीको भूमिका गर्न उमेर नभएको अवस्थामा थिए ।
उनले बिस्तारै सानोतिनो रोल गर्न थाले । तर कुनैमा एउटा मात्रै हात देखिन्थ्यो कुनैमा ढाड मात्रै, कहीँ जिन्दाबाद र मुर्दाबाद, कतै हस् काजी साव् भनेको त कतै प्रहरीले लखेट्दा आक्कल झुक्कल देखिन्थे ।
तर पनि उनी गलेका थिएनन् । कलाकार बन्ने उनको चट्टानी लक्ष्य मरेको थिएन । संघर्षको यात्रा चलिनै रहेको थियो ।
‘सम्झना’ सिनेमा उनले राम्रो रोल पाए । एक्शन नायक निलिख उप्रतिसँगै उनी पनि मुख्य अभिनयमै थिए । त्यो सिनेमा गर्दा उनलाई लाग्यो, म अब नायक भएँ । तर उनले अपेक्षित चर्चा पाएनन् ।
घरपरिवार तथा आफ्ना आफन्तले सिनेमाका पछि लागेर विल्शन विग्रियो भनेर मलेसिया पठाए ।
साथीहरु “तिमी जस्तो कलाकार नेपाल बसेर कलाकारितामा संघर्ष गर्नु पर्छ” भनेर उकास्थे । उनको हरेक दिन मनले भन्ने पनि त्यही हो । उनलाई मेसिलया जाँदा ऋण दिने दिदीलाई फोन गरेर आफ्नो इतिबृतान्त कहे । दिदीले फर्केर आइज भनिन् । उनी पनि आए ।
नेपाल आएर उनले पुरानै कर्म थाले । चलचित्रमा उनलाई जम्नु थियो । त्यही संघर्ष गर्न थाले ।
‘बोके दारी’मा उनले काम गरे । त्यसबाट उनलाई धेरैले चिने । बाटो हिँड्ने फर्केर हेर्न थाले ।
उनले लाइट मेनको काम गरे । प्रोडक्सन म्यानेजर भएर काम गरे । हिरो हिरोइनलाई छाता पनि ओडाए । त्यो बेला दिलीप रायमाझीको क्रेज पनि शिखरमा थियो । उनले दिलीपलाई छाता ओडाउन खाजे । तर दिलीपले, तपाई मलाई छाता नओडाउनुस् भने । तपाई भोली नपाली चलचित्रको सुपरस्टार हो । म तपाईलाई भोली म बाट टाढा भएको हेर्न चहान्न । म तपाईको साथी बन्छु भन्नु भयो । वर्षौदेखी संघर्ष गरिरहेको मलाई उहाको त्यो बचनले थप हौसला मिल्यो संघर्षको मैदानमा रहिरहन ।
एक दिन सुरज सुब्बा नाल्बोले उनलाई सायद नामक चलचित्र गर्नु पर्छ भने । उनले स्क्रिप्ट हेरे । राम्रो लाग्यो । चलचित्रको छायांकन सकियो । चलचित्र राम्रो चल्छ भन्ने लागेको थियो ।
उनी कार्यक्रम उद्घोषण गर्न झापाको केर्खा पुगेका थिए । त्यो कार्यक्रममा मेरी बास्सैका निर्देहक समेत रहेका हाँस्य कलाकार केदार घिमिरे माग्ने बुढा पनि गएका रहेछन् । विल्सनले कार्यक्रमको उद्घोषण गरे । कार्यक्रम सकियो । उनले केदार घिमिरेसँग भने, म पनि अभिनय गर्न सक्छु, म सँग भूपू आर्मी, मधेसी, तेस्रोलिंगी, तराईबासीको गरि चार वटा क्यारेक्टर छन् । उनले हुन्छ मलाई तपाईको नम्बर दिइरनुस् म आवश्यक पर्यो भने सम्झन्छु भने । आफैले नम्बर मागेको देखेर उनी छक्क परे ।
एकदुई दिनपछि केदार घिमिरेले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर फोन गरे । उनी झापामा थिए । तर काठमाडौंमा छु भने । त्यसो भए । आज साँझ मेरो घर आउनुुस् भेटेर कुरा गरौं भने । उनी त्यही दिउसो प्लेनबाट काठमाडौं आएर केदार घिमिरको घरमा पुगे ।
उनले त्यहाँ राईलाई धेरै कुरा भने । राई बसेको सोफा देखाउँदै त्यही सोफामा राखेर मैले इकु सुलेमान शंकरलाई ब्रेक दिदा यसैगरी उहाँलाई कुराकानी गरेको थिएँ । आज तपाईं यही सोफामा हुनुहुन्छ । तपाईले भने मध्ये तपाई एक्स आर्मीको क्यारेक्टर गर्नु्स् । तर म तपाईलाई जम्मा ६ वटा भागमा चान्स दिन्छु । तपाईलाई दशर्कले मन पराए भने ठिक छ होइन भने टेलिसिरियल जबरजस्ती कोच्याउने कुरा होइन ।
केदार घिमिरेको शर्त उनलाई मन्जुर भयो । सुटिंगका लागि गाउँ गए । त्यो गाउँ सम्योगले एक्स आर्मीहरु रहेकै गाउँ परेछ । एक्स आर्मीको उनको गटेअपमा उनले सेतो कपाल पारेर ढाका टोपी लगाएका थिए । तर त्यो सुटिगं हेरिरहेका एक जना भूपू आर्मीले आर्मीले ढाका टोपी लगाउँदैन भनेर आर्मीको टोपि दिए । त्यही टोपि लगाएर उनले दुई भाग सुटिंग गरे । तर प्रशारण हुँदैन । केदार घिमिरेले तपाईंको क्यारेक्टर प्रशारण नहुन पनि सक्छ त्यसैले कसैलाई पनि नभन्नु भनेका थिए ।
उनले कसैलाई भनेन् । भीभीआएपीहरुले चढ्ने जस्तो लामो गाडी सुटिंका कलाकारलाई लिन आउँथ्यो । त्यो गाडी स्वयम केदारले नै चलाएका हुन्थे । उनी पछाडी डिक्की जस्तो सिटमा गएर बस्थे ।
उनले आफ्नो क्यारेक्टरका लागि सुटिंग गरेको तेस्रो भाग हुँदा पहिलो भाग प्रशारण भयो । पहिलो भागले उनलाई क्लिक गरायो । दोस्रो भागले उनलाई हिट बनायो । तेस्रो भागसम्म आइपुग्दा उनी सुपरडुपर हिट भए । जताततै उनको थेगो बोलेको सुनिन थाल्यो ।
सायद चलचित्रबाट जिन्दगीमा टनिंग पोइन्ट आउला भनेर बसेका उनलाई त्यो सिनेमा रिलिज पूर्व नै मेरी बास्लै हिट बनायो ।
सायदसँगै सुरुका सिनेमा चले पनि पछिल्ला उनका सिनेमाले अपेक्षित व्यापार गर्न छोडेपछि उनले चलचित्रमा अभिनय कम गरे । उनले सुरज सुब्बसँग मिलेर रातो घर आँफै बनाए । अधकट्टी, प्रोडुसर र रिदम उनले अभिनय गरेका चलचित्र हुन् । ए मेरो हजुर २ लगायतका चलचित्रमा उनले अभिनय गरेका छन् ।
व्रिटिस गोर्खा मिलिटरी मेडल र सिंगापुर गोर्खा पुलिसलको वेस्ट अर्नर अर्वाड पनि उनले पाएका छन् ।
2015 , NEFTA Award Won Best Comedian Actor
2014 , NEFTA Award Won Best Supporting role
Wilson Bikram Rai (Takme Buda) Movies
Wilson Bikram Rai (Takme Buda) Photo Gallery
Wilson Bikram Rai (Takme Buda) Videos
‘साली कसको भेनाको’
✓ Yubaraj Chaulagain
✓ Udhav Karki
✓ Sisher Yogi
Singer, Music Instructor
✓ S2S (Shreshan)